Xildhibaano walaac ka muujiyay Amni-darrada ka taagan deegaanada Hir-shabeelle-DHEGAYSO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hirshabelle / Xildhibaano walaac ka muujiyay Amni-darrada ka taagan deegaanada Hir-shabeelle-DHEGAYSO
Xildhibaano walaac ka muujiyay Amni-darrada ka taagan deegaanada Hir-shabeelle-DHEGAYSO
June 7, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Xidhibaanada Dowlad Goboleedka Hir-shabeele ayaa ka qala dhaaminaya Amni xumada baahsan ee ka jirta wadooyinka deegaanada maamulkaas.
Xidhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Oo ka Tirsan mudaniyaasha Baarlamaanka Hir-shabeelle ayaa dowlada soomaaliya iyo madaxda uga sareysa maamulka Hirshabeelle ku ee deeyey in ay iyagu sabab u yihiin Amni darada Gobolka K jirta Maadaama dowlada dhexe ee dalka ay ku Guul Dareysatay inay xaqiijiso wadada 90ka KM ah ee isku xirta mogdisho iyo jowhar.
Mudanahaan ka Tirsan Baarlamaanka dowlad Goboleedka Hir-shabeele ayaa Tilmaamay in Haatan aysan jirin xidhibaan safar dhulka ah ku tagi karo tuulo ka mid ah deegaanada maamulka Hirshabeelle, waxa uu madaxda uga sareysa ee dalka ka dalbaday in xaalada sida ay hada Tahay wax ka Bedelaan ayna xil iska saaraan umada ay madaxda u yihiin.
Uga dambeyn Xidhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Ayaa ka hadlay halka ay ku dambeyaan Holwgaladii ka socday Degmooyinka iyo Deegaanada hirshabeelle waxaana uu xusay inaysan jirin wax howlgalo ah oo ka socda Hirshabeelle.
Hadlka xidhibaanka ayaa imaanaya xeli 2 maalin ka hor wadada isku xirta Magaalooyinka Balcad iyo Jowhar lagu dilay madax ka Tirsanaa maamulka Hir-shabeelle.
Hoos ka dhageyso wareysiga xildhibaanka oo la yeesay Aweys Bashir C.raxmaan Tima Jilac